Amagilebhisi: izihlahla ehlobo futhi entwasahlobo
Okuqukethwe amagilebhisi nokunakekela liqukethe kumiswa sezihlahla nge ukusoka yabo. Ufuna ukuthola amagilebhisi enempilo futhi evundile? Izihlahla ehlobo anganikeza ke. Le nqubo kusiza ukudala izimo ezikahle ze izimbali, yokuvuthwa kanye ukuvuna olwengeziwe. Iphinde yakha ehlathini ukuze ebusika kwaba elula ukumboza amagilebhisi. Izihlahla ehlobo noma entwasahlobo kwandisa isivuno kanye nokuvuthwa of amaqoqo amakhulu.
Ngokuvamile, le nqubo siqukethe uphole amahlumela ku sezihlahla, nokujaha, pasynkovaniya, ehlambulula amaqabunga namagatsha ezomile ukuqhekeka e ezingadingekile. Lokhu kuvumela uhlelo lokuvikela kohlobo oluthile isifo, ukufinyelela kwelanga ehlathini nokunye. D. Ngakho-ke, izihlahla amagilebhisi ehlobo noma entwasahlobo akugcini inqubo igama elifanayo.
ESiberia umvini ikhula kahle impela, imivini Nokho izihlahla Spring hhayi kwenziwe ngenxa nesenzakalo okungenzeka ubisi ukulahlekelwa, okuholela kancane ukukhula ihlumela amahlumela. Ekuqaleni kuka-June, lapho ukugeleza ubisi kuzophela, uzodinga ukususa lawo magatsha ukuthi abavezwe desiccation futhi umonakalo kusuka frost nezifo. Njengoba amaJalimane uthi, "Musa ukuthola isivuno esihle, uma kungekhona ukuba anakekele lwamagilebhisi." Izihlahla ehlobo noma entwasahlobo - iyona ingxenye ukunakekelwa ukuthi kubalulekile nokuvuthwa yokuvuna esizayo.
Ebophela emvinini amahlumela - omunye ukwelashwa main yesondlo eziyinkimbinkimbi futhi ukunakekelwa lwamagilebhisi. Kukhona 2 izinhlobo garter: Green futhi yomile. Lesi sakamuva Kwenziwa ukungadluliseli isiqondiso esithile umvini (etshekile, ovundlile, arc noma tetifundvo). Ezindaweni eningizimu ngoba garters ekupheleni best of April noma ekuqaleni May. Ngo ngaphezulu ezisenyakatho inqubo ukufeza okusemandleni kwaze kwaba sekuqaleni Juni, isb. A. Spring ngenyanga amagilebhisi awukwazi ukuphila.
Inqubo "garter green" kuyinto ukulungisa amahlumela trellis. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa Twine, ifilimu emapheshana, neziqu ukhula noma strawberry izimpondo. Ukuze uqonde kangcono ukusebenza ngalezi zinqubo, inqubo ingabonwa njengoba lesi sitshalo kwamagilebhisi ubukeka ezithombeni.
Ukuhambisana kudinga ukunakekelwa efanele uyeke amahlumela entwasahlobo kabili. Umsuka - phakathi ihlumela (amahlumela oyinyumba ziyasuswa), owesibili - emva frost futhi garter imivini. pinching inqubo (ukususwa) wenziwa Ekuqaleni izimbali. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi kungcono ukulungiselela amajikijolo okuxhumanisa. Mint neziqu kufanele kuze ukubukeka iphepha lokuqala evamile. Ukuze wenze lokhu, engcono eyishumi yokuqala noma yesibili ka Agasti. Adult amagilebhisi Mint kwenzeka ukuthi kukhona ukukhula okunamandla amahlumela, okuyinto vele ephakeme kunaleyo ukuphakama phezulu trellis futhi aqale anqikaze. Amaqabunga futhi abadinga usizo thinning. Emasontweni ambalwa ngaphambi yokuvuthwa, ususe amanye amashidi ngasesinqeni.
Buciko zonke izinqubo ezidingekayo, uyokwazi ukulungiselela kangcono izithelo zabo yokuvuthwa ekwindla. Izihlahla ehlobo futhi entwasahlobo - kuba kunesidingo "operation oluhlaza". Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi imivini abasha, le nqubo is contraindicated.
Biology: umzimba - kungcono ... Kuyini uhlelo zemizimba (biology)
Trendy obumbene ehlobo igqoka
Stone Forest e Bulgaria: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso